Kutsvaga yakakodzera anesthesia kudzika kuongorora? Disposable Non-invasive EEG sensors zvakare inoda kuve inobatsira ~ fekitori uye vagadziri | Med-chinongedzo
SpO2 Adapter Tambo
Tungamira-Unganidza ECG Tambo
ECG Trunk Tambo
ECG Holter Vanotungamira
ECG Telemetry Inotungamira
Tungamira-Unganidzo EKG Tambo
EKG Trunk Tambo
IBP Adapter Tambo
IBP Inobviswa Transducers
Reusable Temperature Maitiro
Disposable tembiricha vachiongorora
Disposable kwazvakarerekera Electrodes
CO2 zvichiongororwa nenhumbi
Kutsvaga yakakodzera anesthesia kudzika kuongorora? Disposable Non-invasive EEG sensors zvakare inoda kuve inobatsira ~
Kiyi yeanesthesia uye ICU ndeyekutindivadza kudzika kuongorora. Tingaite sei kuti tiwane yakakodzera anesthesia kudzika kuongorora? Pamusoro pechinodiwa cheanesthesiologist ane ruzivo, anesthesiologist udzamu tarisisa uye iyo inogona kuraswa isiri-inokanganisa EEG sensor inoshandiswa neanesthesia yekutarisa inofanira kunge iine simba.
Disposable Isina-inoparadza EEG sensors
Isu tinoziva kuti kudzika kweanesthesia ndiyo mwero unodzivirirwa nemuviri nekubatanidzwa kweanesthesia uye kukurudzira muviri. Sezvo kusimba kweanesthesia uye kukurudzira kuchiwedzera uye kuchiderera, kudzika kweanesthesia kunochinja zvakafanana.
Anesthesia kudzika kwekutarisa kwagara kuri kunetseka kweanesthesiologists. Kunyanya kudzika kana kudzika kunokonzera kukuvara mumuviri kana kwepfungwa kuvarwere. Kuchengetedza kwakadzika kwakakodzera kweanesthesia kwakakosha kuti uve nechokwadi chekuchengetedza murwere uye nekupa mamiriro akanaka ekuvhiya.
Zvinonzi BIS ine kuwirirana kwakanaka pamwe nekusungwa kwemishonga yakawanda yeanesthetic, saka kutungamirwa kweiyo intraoperative anesthetic drug chipimo chemushonga, kushandiswa kweBIS kuongorora, zvinoenderana nemhedzisiro yekutarisa kutungamira kushandiswa kweanesthetic zvinodhaka, izvo zvinogona zvirinani kuchengetedza kudzika kweanesthesia uye kutamba yakanaka anesthetic mhedzisiro.
Nekuvandudzwa kweEEG yekuongorora tekinoroji mumakore achangopfuura, BIS (bispectralindex) yave nzira inozivikanwa yekuongorora zvirinani kwecerebral cortex chinzvimbo chinzvimbo uye shanduko, uye inogona kushandiswa seyakajairika uye yakavimbika anesthesia kudzika nzira yekutarisa mumakiriniki maitiro.
BIS inhamba yekuverenga inotorwa kubva kune mbiri-frequency EEG rekodhi yekuburitswa kweakasiyana anesthetic zvinodhaka mune yakakura sampuro. Iyi data yakawanikwa zvakanyanya kubva kune yakakura sampuro yezvidzidzo inogamuchira maviri anesthesia madhiragi akaomeswa neaviri-frequency EEG marekodhi, uye mamiriro ekuziva, sedation level, uye ese akanyorwa EEG akaita dhatabhesi. Zvino, zvichibva pane iyo electroencephalogram (EEG) frequency spectrum uye simba remagetsi, huwandu hweruzivo rwakavhengana runokodzera kubva mukuwongorora kusiri kwemutsara kwechikamu uye harmoniki inowedzerwa.
BIS ndiyo yega yeanesthesia sedation yekutarisa index yakatenderwa neUS FDA, iyo inogona kuongorora cerebral cortical function chinzvimbo uye inoshanduka zvirinani, ine kumwe kunzwisisika kwekufungidzira kufamba kwemuviri, kuziva kwekuvhiya, uye kurasikirwa uye kupora kwekuziva, uye kunogona kudzora anesthetic zvinodhaka Dosage is imwe nzira chaiyo yekutonga sedation danho uye kuongorora kudzika kweanesthesia neEEG.
BIS yekutarisa index
BIS kukosha zana, mamiriro ekumuka; BIS kukosha 0, hapana EEG chiitiko (cerebral cortex inhibition), (cerebral cortex inhibition). Kukosha kweBIS kunowanzoonekwa seyakajairika pakati pe85 ne100. 65 ~ 85 inonyaradza; 40 ~ 65 ndeinotindivadza. <40 Inogona kuburitsa kudzvinyirira.
Nekuda kwekutarisa kwakadzika uye kwakakodzera kudzika kweanesthesia panguva dzakaomarara, iyo inogona kurasa isina-invasive eeg sensor inoshandiswa neanesthesia kudzika kuongorora inofanira zvakare kubatsira, kuitira kuti huwandu hwezviratidzo mune chero nyika hunogona kuratidzwa nenzira kwayo.
Shenzhen Med-chinongedzo Electronics Tech Co, Ltd (ino ichazonzi Med-linket) ine makore gumi nemashanu ekutsvagisa ruzivo mune zvekurapa tambo magungano. Mushure memakore ekuongororwa kwekiriniki, isu takazvimiririra takagadzira isingabvumike isina-invasive EEG sensor, inoenderana neyakaiswa zita reanesthesia kudzika monitors nemaBIS module akadai seMindray nePhilips. Chiyero chinonzwisisika, kukosha kwacho kwakarurama, uye kugona kupokana-nekukanganisa kwakasimba. Inobatsira anesthesiologist kunyatso tarisa murwere asingazive uye nekupa inowirirana yekudzivirira uye yekurapa matanho munguva maererano nemamiriro ekuongorora.
Sarudza Med-linket isiri-inokanganisa EEG sensor, sarudza Med-linket yehunyanzvi mhando, makore gumi nemashanu ekurima zvakanyanya, pasi-pasi, ine mutengo-unoshanda wezvokurapa tambo tambo, batsira epamba zvigadzirwa kupaza.
* Kuzivisa: Zvese zvitengesi zvakanyoreswa, mazita, mamodheru, nezvimwe zvinoratidzwa mune zviri pamusoro zvirimo ndezvake muridzi wepakutanga kana wepakutanga mugadziri. Chinyorwa ichi chinongoshandiswa kuratidza kuenderana kweMed-Linket zvigadzirwa. Iko hakuna chimwe chinangwa! Zvese zviri pamusoro. ruzivo nderwekureva chete, uye harufanire kushandiswa seyambiro yebasa remasangano ekurapa kana zvikamu zvine hukama. Zvikasadaro, chero mhedzisiro inokonzerwa nekambani iyi haina chekuita nekambani iyi.
Previous: Philips MX40 Inoenderana ECG Telemetry Leadwires ET035C5I
Next: D-YS Inoenderana inoshandiswazve Multi-saiti SPO2 sensor
Post nguva: Dec-06-2019
Runhare: (86) 400-058-0755